Google vrs. Xaqiiqo ah, dagaalku waa mid culus - Geofumadas
Google vrs. Wacan, dagaalka waa halis
Juunyo, 2008 Google Earth / Maps, dalwaddii Earth
Google iyo Microsoft waxay sii wadaan dagaalka ay ugu jiraan buufinnada dalxiiska, labaduba waxay fureen istiraatiijiyad la mid ah, iyagoo ka dhigaya xogtooda inay u heli karaan bulshada qadka toos ugu cusboonaysiin karaan
Sannadkii hore, Google ayaa qaabeeyey foom si dadka ama hay’aduhu u buuxin waayaan, iyagoo ogeysiinaya waxay hayaan ... sida muuqata si loo ogaado halka ay macluumaad ka heleen.
Google Earth: halkaan riix
Hadda Google ayaa bilaabay map Kan sameeyey (iyada oo aan daryeelin haddii ay jirto patent), kani waa bedel u ah isticmaalayaasha inay dhisaan xog isla markaana dhexdhexaad ka ah waxa la soo galiyay. Google soo jeedin in si loo abuuro xog aad leedahay zoom u dhaxaysa 500 iyo 1000 mitir, waxaad ku dari kartaa dhibco xiisaha, wadooyinka iyo polygons.
Tusaalahan wuxuu muujinayaa waddo laga sawiray muuqaalka, taa waxaa raacsan sifooyinka xawaaraha iyo xaaladaha ayaa lagu daray; ka dibna kuwo kale ayaa oggolaaday. Iyo sida ay u egtahay sawirka Google Earth, waa hubaal inay tahay sida mitirka 30 ee wajiga.
Si kastaba ha noqotee, maahan wax kasta oo xun, ikhtiyaarka dhexdhexaadku wuxuu iila muuqdaa mid fiican, taas oo aan ka jirin ololihii hore ee Google ee ku hawlanaa qandaraasinta ama helitaanka xogta; natiijada tabahaas ayaa timid heer wanaagsan oo ah cusboonaysiinta wadada dalal badan oo Isbaanish ah. Waxay umuuqataa in lagu qiimeeyay mitirka toosan ee xargaha ... wiilkuna ma dhaliyay gool, arag kuwaan sawirada wadada Marcovia ee koonfurta Honduras.
Kii kaa iibiyay xogta wuxuu ilaaway fikirka "wadada" wuxuuna soo jiiday waddo kasta oo lo'da loogu kaxeeyo guryaha miyiga ... Wuxuu ilaaway inuu si cad u dhigo laydhadhka taraafikada oo hubaal inuusan ku dari karin sifooyinka xawaaraha heh heh. Dhammaan gobolka koonfureed ee Honduras waa sidan oo kale, u fiirso in aagagga magaalooyinku aanu lahayn hal waddo, laakiin hoos u dhigid kasta iyo marin u dhexeysa maraakiibta wax soo saarka milixda iyo beeraha haruurta ayaa la soo jiiday.
Tani waxay sidoo kale hagaajin doontaa habka xog ururinta bulshada, taas oo ah waxa aan ku aragno gudaha Google Earth halkaas oo jahwareer badan uu ka jiro macluumaadka, xog uruurinta iyo nuqullada xogta ah.
Haatan, barnaamijka samaynta khariiddada ayaa loo bilaabay waddammada ay xogta aad u yar tahay:
Cyprus, Iceland, Pakistan, Vietnam;
inta soo hartay waxay ku jiraan Kariibiyaanka: Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Grenada, Jamaica, Netherlands Antilles, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & the Grenadines, Trinidad & Tobago
Earth Virtual: Sii sharaf si aad u tixgeliso xogtaada
Dhinaceeda, Virtual Earth waxay bilowday olole loogu talagalay kuwa raba inay la wadaagaan sawirradooda hawada.
Istaraatiijiyadda ayaa wax yar ka duwan Google sanadkii hore, taas oo ahayd inuu ugu yaraan jiray hal qaab. Xaaladdan oo kale, waxay kaa filayaan inaad u dirto iyaga a boostada gabay u sheegaya halka aad ka haysato sawirro, haddii ay danaynayaanna waxay kuu soo diri doonaan faahfaahinta.
Waxay kugu siin doonaan sumcadda ... laakiin lacag malahan, qiyaas sida ay u fiicnaan laheyd haddii qof yimaado meel meeraha ah oo ku taal Dhul gariirku yiraahdo "qaar ka mid ah sawirrada khariidadan waxaa si naxariis leh u bixiyay ..."
Dabcan ma dhihi doonaan "iyo sawiradaas waxaan si naxariis leh u sameysannay lacag aad u badan"
Waan arki doonaa meesha ay tani dhammaato, maxaa yeelay hadda waa ganacsiga wiilasha Sawirka iyaga oo leh Dhexdhexaadinta hal mitir square
Post Previous" Hore Erdas wuxuu soo bandhigay version Google Earth
Post Next Saamaynta safarka uu ku tagayo BoliviaNext »